Home Wararka RW Rooble oo ku Adkeystay inuu Maxkamad la tegayo Maxamed Farmaajo
[XOG] RW Rooble oo ku Adkeystay inuu Maxkamad la tegayo Maxamed Farmaajo
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku adkeystay inuu Dacwad kusoo oogayo madaxweynaha waqtigiiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Rooble ayaa go’aankan u sheegay xubnaha Golaha Wasiirada shirkii habeenkii Jimcaha ay yeesheen ee laga soo saaray cambaareynta Afgenbigii fashilmay ee xarunta Golaha Wasiirada 27-kii Disembar 2021 iyo Guddi baaritaan oo loo saarayo.
Maxamed Xuseen Rooble ayaa si kulul ugu sheegay Golaha wasiirada inuu Farmaajo iyo ciddii ku lug lahayd afgembiga la tiigsanayo sharciga, wax kasta oo ay ku qaadato, lana tegi doono Maxkamadaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
Rooble ayaa xalay magacaabay Guddi ka kooban shan wasiir oo soo baaraya wixii 27-ka Disembar ka dhacay xarunta Madaxtooyada oo lagu tilmaamay afgembi, markii laga hor istaagay inuu tago xafiiskiisa.
Afhayeenka Farmaajo ayaa beeniyey inay jireen ciidamo Ra’iisal wasaare hor istaagay, laakiin wuxuu sheegay in Rooble loo heysto kiisas, shaqadana laga joojiyaym inkastoo wareegtadaasi shaqeyn weyday.
Previous articleSh. Sharif oo xalay kulan dhuumasho ah ugu tagay Farmaajo! Yaa kaloo joogay kulankaas
Next article[Deg Deg] Farmaajo oo lagu qasbay in uu dalka isaga baxo
Dowladda Soomaaliya oo bishan saxiixeysa heshiiskii isdhexgalka Itoobiya & Eriteriya
Turkiga oo ka hadlay nooca doorashooyinka Somalia iyo xilliga ay tahay...